Outlook Express Susa Susa Ithuluzi. Outlook Express Ukususwa Kwe-imeyili Okususiwe.
DataNumen Outlook Express Undelete iyona best ithuluzi lokuthola ama-imeyili asusiwe ku- Outlook Express. Isebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe ukuskena amafayela e-DBX bese isusa ama-imeyili akho ngangokunokwenzeka.
Sicela usebenzise DataNumen Outlook Express Repair ukuthola ama-imeyili ku-CORRUPT Outlook Express amafolda eposi.
Sicela usebenzise DataNumen Outlook Repair ukuthola ama-imeyili nezinye izinto kusuka kumafayili we-CORRUPT Outlook PST.
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,510)
Kungani DataNumen Outlook Express Undelete?
Inothi nje lokukwazisa ukuthi lolu hlelo olungenhla lusebenze kahle kakhulu futhi ngalulama ngempumelelo i-almost Ama-imeyili angama-3000 engibe nawo ngengozi
Inothi nje lokukwazisa ukuthi lolu hlelo olungenhla lusebenze kahle kakhulu futhi ngalulama ngempumelelo i-almost Ama-imeyili angama-3000 engangiwasuse unomphela ngengozi. Ngeke nginqikaze ukukuncoma kozakwethu nabangane.
I-SA Bias Industries Limited
Ngizamile eminye imikhiqizo emithathu ngaphambi kokuthola i-Advance Outlook Express Ukubuyiselwa. Izinhlelo ezimbili zithole yonke imilayezo, noma kunjalo, imilayezo ibinayo
Ngizamile eminye imikhiqizo emithathu ngaphambi kokuthola i-Advance Outlook Express Ukubuyiselwa. Izinhlelo ezimbili zathola yonke imilayezo, noma kunjalo, imilayezo yayingenayo idatha emzimbeni. Owesithathu akazange athole yonke i-imeyili ekhona. Umzamo wokuqala nge-Advance Outlook Express Ukubuyiselwa kubonise wonke amafayela kusivivinyo. Ngithengile umkhiqizo futhi yonke imiyalezo engiyifinyelele itholakale ngokushesha. Lo mkhiqizo omnandi futhi ulifanele impela inani.
I-Rockwall, TX, e-USA
Ngendlela, imikhiqizo inhle kakhulu. Ngishiya ukubonga kwami ​​kubafana abenze amathuluzi awusizo kangaka.
Baxazulule umphefumulo wami ngempela.
UMorganite Brasil Ltda
ISão paulo, eBrazil
Ngibe nenkinga ngefayela lokukhipha i-1.5GB, bengishubile kakhulu kepha i-AODR ixazulule inkinga yami yangisiza ukuthi ngithole yonke idatha yami, Ngiyabonga kakhulu
Ngibe nenkinga ngefayela lokukhipha i-1.5GB, bengishubile kakhulu kepha i-AODR ixazulule inkinga yami yangisiza ukuthi ngithole yonke idatha yami, Ngiyabonga kakhulu Datanumen.com Ithimba elingisizile ekukhetheni ithuluzi elifanele lenkinga yami.
UMaqbool Ahmed Rashid Ali KHAN
Est. IJeddah Saudi Arabia
Izici eziyinhloko ku DataNumen Outlook Express Undelete v2.2
Ukusekela ukuthola ama-imeyili asusiwe ku-Microsoft Outlook Express Amafolda weposi ama-5/6.
Ukusekela ukuthola amafayela e-dbx agcinwe kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukuthola iqoqo lamafayela e-dbx.
Ukusekela ukuthola ama-imeyili kumafayela we-dbx amakhulu njenge-4GB.
Ukusekela ukuthola okunamathiselwe kwe-imeyili.
Ukusekela ukuthola nokukhetha amafayela e-dbx azotholwa kukhompyutha yendawo.
Kuhlanganiswe negobolondo leWindows, ukuze ukwazi ukuthola ama-imeyili kwifolda yeposi ngomongo (wokuchofoza kwesokudla) weWindows Explorer kalula.
Outlook Express igcina wonke ama-imeyili efolda yeposi kufayela elihambisanayo le-.dbx. Isibonelo, ifayela le-Inbox.dbx liqukethe ama-imeyili akhonjiswa kufolda yeposi le-Inbox in Outlook Express, Ifayela le-Outbox.dbx liqukethe ama-imeyili akhonjiswa kufolda yeposi le-Outbox, njalonjalo.
Uma ususa ama-imeyili ambalwa kufolda yeposi ngephutha, ungasebenzisa DataNumen Outlook Express Undelete ukuskena ifayela le-dbx elihambelana nefolda yeposi, ukuthola ama-imeyili asusiwe bese uwagcina njengamafayela we-.eml angeniswa kalula emuva Outlook Express.
Thola ifayela le-dbx elihambelana nefolda yeposi uma ungenzanga kanjalo.
Qaphela: Ngaphambi kokuthola ama-imeyili asusiwe kufayela le-dbx nge DataNumen Outlook Express Undelete, ngicela uvale Outlook Express kanye nanoma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha ifayela le-dbx.
Khetha ifayela le-dbx lapho ama-imeyili asusiwe etholakala khona:
Ungafaka igama lefayela le-dbx ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha ifayela.
Ngephutha, DataNumen Outlook Express Undelete izokhipha wonke ama-imeyili atholakele enkombeni xxxx_recovered, lapho i-xxxx igama lefayela elonakele le-dbx. Isibonelo, ngefayela le-Inbox.dbx, umkhombandlela wokukhipha okuzenzakalelayo uzoba yi-Inbox_recovered. Uma ufuna ukusebenzisa esinye isiqondisi, sicela usikhethe ngokufanele:
Ungafaka igama lesikhombi ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha umkhombandlela.
Chofoza inkinobho, DataNumen Outlook Express Undelete intando start ukuthola ama-imeyili asusiwe kufayela elikhethiwe le-dbx.
izokhombisa inqubekela phambili yokutakula.
Ngemuva kwenqubo yokutakula, uma ama-imeyili asusiwe etholakale ngempumelelo kufayela le-dbx, uzobona ibhokisi lomyalezo kanjena:
Manje usungavula umyalezo obuyisiwe nge Outlook Express ngokuchofoza kabili ifayela le- isithonjana sefayela le-.eml kumkhombandlela wokukhipha. Noma ngenisa imilayezo eminingi kufolda yeposi ku Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Undelete 2.2 ikhishwa ngoNovemba 23, 2013
Lungisa ezinye izimbungulu.
DataNumen Outlook Express Undelete 2.1 ikhishwa ngoJulayi 17, 2009
Thuthukisa ukusebenza kwenjini yokutakula kakhulu.
Thuthukisa ukuhambisana kwe-GUI ezinqumweni ezihlukene nasezinhlelweni zokusebenza.
DataNumen Outlook Express Undelete 2.0 ikhishwe ngoMashi 5, 2009
Phinda ubhale lonke uhlelo lokusebenza.
Buyisela imiyalezo nezinye izinto kumafayili wesitoreji se-Microsoft Exchange esingaxhunyiwe ku-inthanethi noma esonakele (.ost)
Buyisela ama-imeyili akhohlakele Outlook Express dbx namafayela we-mbx.
Lungisa futhi ubuyise amafayela wedatha we-Microsoft Outlook (.pst) okhohlakele.